Waxay YouTube ku baahisa baaritaannada dilalka foosha xun waxaana ku taxan 131 malyan oo qof - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Waxay YouTube ku baahisa baaritaannada dilalka foosha xun waxaana ku taxan 131...
Waxay YouTube ku baahisa baaritaannada dilalka foosha xun waxaana ku taxan 131 malyan oo qof
Iyada oo ka warrameysa kiisaska dilalka taxanaha ee foosha xun haddana waxay kasbatay dad ka badan 131 malyan iney boggeeda You Tube ay ku xirnaadan. Sheekadu maxay tahay?
“Weligeyba waxaan jeclaan jiray dambiyada dhabta ah, tani iyo yaraanteydina aad ayaan u xiiseyn jiray waaliddiinteyda gaar ahaan hooyadeey waxay si joogta ah ula socon jirtay baaritaannada faldambiyeedyada iyo dilalka iwm” ayey tiri.
Neal waxay ku mashquulsaneyd dilalka iyo gacan ku dhiiglayasha oo keli ah iyada oo 15 jir ah ayeyna ku biirtay barta Netflix ee filimaanta lagu baahiyo.
Neal waxay sheegtay “Marki ugu horreysay dukumantyadi ay u baahneed oo dhan iney hal toddobaad ay ku guudmartay ayna ku ogaatay iney fursad halkaasi ka bannaantahay.”
“Maskxada dilalka ka dambeysa”
Kaddib marki ay Neal go’aansatay waxa ay dooneyso iney sameyso, waxay ku biirtay jaamacad si ay uga soo barato cilmu- nafsiga.
“Waxaan aniga aad u xiisaya kuwa wax dilo sida ay maskaxdayada uga duwan yihiin,” ayey tiri Neal. Aad ayaanna u jecelahay marxaladda loo maro baaritaannada dambiyada dhacay lagu ogaanayo.
Kannaalka You Tub-ka
Inkasta oo ay Neil jecleyd iney barato cilmu-nafisga dadka wax dila haddana waxaa lagu qasbay iney jaamacadda ka baxdo maadaamaa ay xoogga saartay dhinaca barta You Tube-ka ee ay bulshada baaritaannadeda kula wadaagto.
“Marka hore oo aan You Tube billaabayey waxaan billaabay casharro ku saabsan isqurxinta oo la mid ah kan uu diyaariyo James Charles, marki dambana waxaan ogaaday inaan aniga u sameysneen waxyaabaha isqurxinta la xiriira aanna ku qanacsaneen” ayey tiri Neal.
Kannaalkeeda isqurxinta oo sanad iyo badh shaqeynayey oo ay ku taxnaayeen celcelis ahaan wax aan ka badneen 100 waxay u beddeshay kannaalka dhiigga uu ka da’aya ee ay ku soo qaadato dilalka naxdinta badan ee dhaca iyo baaritaannada dambiyadaasi la xiriira. Wuxuuna kannaalkeeda cusub ee You Tube uu seddex sano gudahood uu soo jiitay macamiil ka badan 1 malyan.
Qoraalka sawirka,Eleanor Neal ilaa iyo carruurnimadedi waxay jecleed baaritaannada la xirira dilalka
Neal waxay sheegtay:”Kaliya waxa macamiisha intaasi dhan soo jiitay ma ahayn hal muuqaal oo keli ah oo kannaalka You Tube la soo dhigay balse muuqaallada qaarkood waxay ahaayeen kuwa ay dadka kannaalka ku xiran ay ku soo tala bixiyaan qaybta farriimaha, muuqaallada qaarkood oo keenaya natiija aad uga wanaagsan inti la filayey.”
Tiro badan oo taageerayaal ah oo ku xiran bogga You Tube-ka ee Eleanor Neal oo tai iyo carruurnimadeedi jecleed baaritaannada la xirira dilalka waxay la wadaagayeen raadad cusub oo baaritaannada la xiriira maadaama ay qaybta faallada ee muuqaallada ay macamiisha u saamaxeyso inay talooyinkooda ugu diraan si ay talooyinka cusub ee baritaanka oo loo soo jeediyey ay u raacdo.
Eleanor Neal waxay aaminsan tahay iney xirfadaheeda baaranimo ay marweliba karti iyo waayaragnimo u sii yeelaneysay waxayna sheegtay markay muuqaalladeedi hore qarkood ay daawato iney ka qoomameyso oo waxyaabaha khaldan oo ay xilligaasi waayaragnimo la’aanta ka hoos bixisya ay ku aragto.
“Inta aan baaritaannada ku guda jiray dareenkeyga iyo shucuurtyeda intaba waan xakameynayey, balse waxaan xusuustaa marki aan baarayey kiiski Jimmy Bulger oo ah mid ka mid kiisaski ugu xumaa uguna adkaa oo aan noolasheyda abid maqlo, waxaan xusuustaa inta aan baaritaanka waday inaan in badan ooynayey.” ayey tiri.
Iyada oo ay taasi jirto hadda Neal waxay sheegtay kiisaska ay baareyso iney si wanaagsan uga gungaarto oo ay ka daalin.
“Inta badan waxaan aad ugu fiicanahay la macaamilka dadka aniga oo waxweliba ka horreysiinayo iney shaqadan tahay teyda ayna waajib igu tahay inaan shaqadeyda sida ay tahay aan u qabto, maskaxdeyduna wey ogtahay goorweliba oo ay shaqo ii taallo ama la gaaro xilligi shaqada aan qaban lahaa,” ayey tiri Eleanor Neal.